कथा स्वर्ण विजेताको : मान्छे चिच्याएको आवाज पछ्याउँदै तेक्वान्दोसम्म पुगेकी थिइन् संगीता
नेपालमा सम्पन्न १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा चितवनकी संगीता बस्यालले ६२ केजी तौल समूहमुनि स्वर्ण पदक जितिन् । तर तिनै संगीतालाई १४ वर्षको उमेरमा तेक्वान्दो भन्ने खेल हुन्छ भन्ने नै थाहा थिएन रे !
त्यो बेला उनले कराँते खेलमात्रै सुनेकी थिइन् । उनी स्कूल जाँदा बाटोबाट मान्छेहरू चिच्याएको सुन्थिन् । एक दिन होइन, दुई दिन होइन । जहिल्यै मानिसहरू चिच्याएको आवाज उनको कानमा ठोक्किन्थ्यो ।
एकदिन उनलाई बुझ्न मन लाग्यो- होइन, मानिसहरू किन जहिल्यै चिच्याउँछन् ? त्यो पनि एकै स्वरमा ।
चिच्याएकै ठाउँमा पुगेपछि उनले थाहा पाइन्- यो पनि एउटा गेम रहेछ । सेतो ड्रेस लगाएर किक हान्ने खेललाई तेक्वान्दो भन्दा रहेछन् ।
किशोरावस्थामा भर्खरै पाइला चाल्दै थिइन् उनी । अरूले जे गर्‍यो त्यही गर्न मन लाग्ने । संगीतालाई पनि अरूले जस्तै सेतो ड्रेस लगाएर किक हान्न मन लाग्यो ।
अनि शुरू भयो तेक्वान्दो यात्रा
१४ वर्षको उमेरमा संगीता र बहिनीले बाफल तेक्वान्दो डोजाङमा भर्ना भए । राम गिरी गुरु थिए । दशैंको समय थियो । उनीहरू फ्री थिए । दशैंको एक महिने बिदामा उनीहरूले तेक्वान्दो सिके ।
सिक्न त जान्थे तर बुवाआमाकै पूर्ण रूपमा समर्थन थिएन । घरबाट तेक्वान्दो सिक्न जान अनुमति थियो तर नखेले हुन्थ्यो भन्थे रे !
'केटाले खेल्ने गेम किन खेल्नुपर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो । ड्याडीले हुन्न भन्नुहुन्थ्यो भने ममीले कुनैकुनै कुरामा मैले तेक्वान्दो नखेलिदिएहुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्थ्यो,' संगीताले शुरूआती दिन सम्झिइन् ।
उनले तेक्वान्दो सिक्नका लागि बुवाआमासँग पैसा पनि मागिनन् पहिला । भन्छिन्, 'हजुरआमाले तेक्वान्दोको लागि पैसा दिनुहुन्थ्यो ।'
स्कूल पाँच बजेसम्म हुन्थ्यो । हतारहतार घर गएर ड्रेस चेन्ज गरेर छिटोछिटो तेक्वान्दो खेल्न गइहाल्थिन उनी । अनि सात बजे फर्किन्थिन् । उनले बाफलस्थित ज्ञानोदय स्कूल पढ्दै तेक्वान्दो सिकिन् ।
ह्वाइट बेल्टमै हुँदा उनले पहिलो टुर्नामेन्ट खेलेकी थिइन् । उनको भनाइअनुसार राम्रै प्लेयरसँग फाइट परेको थियो । त्योबेला नकआउट खाइन् । अनुभव नभएका कारण हारेको उनी बताउँछिन् ।
त्यतिबेलै उनले सोचेकी रहिछिन्- हारेर के भो त, सिक्न बाँकी छ । मेहनत गर्छु । एकदिन सफल कसो नहुँला र !
म गेमहरूमा भाग लिइरहन्थिन् । तर खाली हात हुँदैनथ्यो । कहिले सिल्भर त कहिले ब्राउन्च जित्थिन् उनी । तर गोल्ड मेडल जित्न सकेको थिइनन् । उनलाई अरूले गोल्ड मेडल जितेर खुशी भएको देख्दा आफूले त्यो सफलता कहिले हासिल गर्ने होला भन्ने मनमा लागिरहन्थ्यो रे ! यतिसम्म कि आफूले कहिले गोल्ड मेडल जित्न सक्तिनँ कि भन्ने सम्म सोचेकी रहिछिन् ।
मनमा गोल्ड मेडलको सपना पाल्दै उनी लगातार लागिरहिन्, मेहनत गरिरहिन् । उनको मेहनतले धनगढीमा आयोजित छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा मूर्त रूप पायो । अर्थात् पहिलो गोल्ड मेडल जितिन् ।
त्योबेला उनी भर्खरभर्खर नेसनल टीममा परेकी थिइन् । 'म त्योबेला एपीएफबाट कन्ट्र्याक्टमा खेल्थेँ । त्यो बेला सेमिफाइनल चाहिँ पुलिसको खेलाडीसँग परेको थियो,' पहिलो स्वर्ण पदक जित्दाको क्षण सम्झिँदै उनले भनिन्, 'फाइनल चाहिँ आर्मीकै खेलाडी थिइन् ।
राम्रै भयो गेम । तीन वटै फाइट जितेँ ।' त्यसपछि उनले एकाध खेलबाहेक गोल्ड मेडल जितिरहेकी छन् ।
गेम सकेर घर फर्कँदा कहिले चोटपटक लागेको हुन्थ्यो । हो, त्यहीबेला उनलाई बुवाआमाले 'नखेल' भन्दारहेछन् । तर छैटौंमा गोल्ड जितेपछि उनी पत्रिकामा छापिइन् । त्यसपछि भने घरबाट पूर्ण रूपमा सपोर्ट पाइन् ।
छैटौं, सातौं र आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा मैले गोल्ड मेडल जितेर ह्याट्रिक गरिन् । उनी भन्छिन्, 'त्यो सपना थियो, पूरा गरेँ ।
त्यसपछि नेपालमा दोस्रो माउन्ट एभरेस्ट तेक्वान्दो प्रतियोगिता भएको थियो । त्यसमा पनि गोल्ड मेडल जितिन् । 'यो नै मेरो जीवनको अविस्मरणीय क्षण हो । किनकी यो मेरो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता थियो,' उनले भनिन्, 'त्यो बेला मेरो खुशीको सीमा थिएन । त्यसपछि पाँचौं, छैटौं र आठौं कोरियन एम्बास्डरमा गोल्ड मेडल जितेँ ।'
त्यो हार …
१२ औं सागमा उनलाई देशको प्रतिनिधित्व गरेर खेल्न ठूलो चाहना थियो । सेलेक्सन पनि खेलिन् । तर आयुषा शाक्यसँग फाइनलमा हारिन् । उनले भारतमा भएको सागमा सहभागिता जनाउन पाइनन् ।
त्यो हारबाट उनी कति पनि विचलित भइनन् । किनभने उनलाई थाहा थियो आफूले राम्रो खेलाडीसँग हारेको । त्यसपछि उनले मेहनतको दायरालाई बढाइन् । भन्छिन्, 'हार्दा खेरि राम्रो खेलाडीसँग हारेको थिएँ । अब मैले अझै मेहनत गर्नुपर्छ । एसियन गेमहरू पनि छ । त्यसमा राम्रो गर्नुपर्छ भनेर ट्रेनिङमा मेहनत गरेँ ।' एसियन गेममा चान्स पनि पाइन् तर मेडल आएन ।
अर्को सागमा मेहनत गरेर जसरी पनि गोल्ड मेडल ल्याउँछु भन्ने अठोट गरिन् उनले । उनलाई अहिले त्यो सपना पूरा गरेको गरेको जस्तो लाग्छ । 'त्यो सपना पूरा गरेँ, खुशी छु,' उनले सुनाइन् ।
साग गेम हुनुभन्दा एक महिना अगाडि उनी ट्रेनिङको लागि चीन गएकी थिइन् । त्यहाँको ट्रेनिङले सागमा मेडल ल्याउन सपोर्ट भएको उनको भनाइ छ । 'धेरै कुरा सिक्न पाइयो । नेपाल आएर पनि धेरै ट्रेनिङ गर्‍यौं । गुरुहरूले पनि कसरी स्कोर गर्ने भन्ने टिप्सहरू दिनुभयो,' संगीताले सफलता पछाडिका कुरा सुनाइन् ।
उनले केही समयअघि सम्पन्न सागमा ६२ केजीमुनि तौल समूहबाट खेलेकी थिइन् । फाइलमा भारतीय खेलाडी गगनजोत गिलसँग परेको थियो । भारतको भनेपछि उनको मनमा डरले डेरासमेत जमाएको रहेछ ।
'अपोनेन्टलाई कमजोर सम्झनुहुन्न भन्ने फील भयो तर जसरी पनि मेडल ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचेर जसरी पनि जित्नैपर्ने दबाबमा थिएँ म,' उनी सम्झिन्छिन्, 'रिङभित्र गएर जसरी पनि उविरुद्ध स्कोर ल्याउनपर्छ । उसलाई स्कोर गर्न दिनुहुन्न भन्ने मात्रै दिमागमा थियो ।'
उनले स्वर्ण पदक जितेको खेल बुवाले पनि लाइभ हेरे । तर हलमा उनको बुवाको आगमन 'सरप्राइज' थियो । बुवा आउनेबारे उनलाई थाहा थिएन ।
'ड्याडी आउनुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन । म गेमको लागि प्रतीक्षामा थिएँ, ठ्याक्कै देखेँ,' उनले त्यो क्षण सुनाइन् ।
बुवालाई देखेपछि उनी एकछिन छक्क परिन् ।
के बोलुँ, के बोलुँ भएछ- 'गेम हेर्न आउनुभएको ?' भनिछन् ।
बुवाले 'अँ' भनेछन् ।
'ममीले ड्याडीलाई भन्नुभएको रहेछ मेरो गेम छ भनेर । जे होस्, हेर्नुभयो । खुशी हुनुभयो,' उनी केही भावुक सुनिइन् ।
उनले अब जीवन खेलमै बिताउने बताइन् । 'यदि मैले खेल्न सकिनँ भने कोचको भूमिका पनि निभाउन सक्छु,' उनले कुराकानीको बिट मार्दै भनिन्, 'बच्चाहरूलाई सिकाएर पनि बस्न सक्छु । यो पछिको कुरा हो ।'
सीआईएका नयाँ निर्देशक कूटनीतिमा गर्छन् विश्वास, रोकिएलान् ड्रोन आक्रमण ?
बेलायती थिंकट्यांकले गर्‍यो भारतको कठोर आलोचना
आफ्नो अण्डा जोगाउन ट्य्राक्टरका अगाडि उभियो चरा (भिडियो)
काँग्रेसले बोलायो बैठक, यी हुन् छलफलका एजेण्डा